Fantaro i Ujwol Dangol, mpanorina ny kianja natokana ho an’ny skateboard voalohany ao Kathmandu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2018 6:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, русский, čeština , Ελληνικά, English
Kianja Ktm Skate Park ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu. Sary avy amin'ny pejy Facebook Skate Park. Nahazoana alalana.
Eo anivon'ireo tranobe mifanety izay manamorona ny Renirano Bishnumati, mivory mba hanatsara ny fahaiza-manaony amin'ny fanatanjahantena iray izay mbola mampitolagaga ny fiarahamonina Nepaley ny vondron'ankizy : skateboard.
Ao anatin'ity toerana kely mifefy beton ity no misy ny “Ktm Skate Park”, ilay kianja fanaovana skateboard voalohany indrindra izay tsy mbola nisy hatramin'izay tao Kathmandu. I Ujwol Dangol no mitantana ny fampisehoana, mpanao skateboard ao an-toerana izay nitsambikina voalohany tamin'ity takelaka ity fony izy teo ho eo amin'ny 14 taona teo ary tsy niverin-dalana intsony izy nanomboka teo. Tamin'ny volana Jona 2018, niresaka tamin'ny Global Voices izy mikasika ny tetikasany sy ny drafitra ho an'ny hoavy .
Nahatsapa voalohany ny aingam-panahy hanokatra ny kianja ho an'ny skateboard ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu i Ujwol tamin'ny taona 2014 rehefa niverina avy tamin'ny diany tany Bangkok, toerana izay nahitana ny filalaovana skateboard niroborobo efa somary elaela kokoa. Nosokafany aloha ny fivarotana takelaka skateboard ary avy eo nanomboka nanangona ny fitaovana ho an'ny kianja izy ary niasa tamin'ny fiarovana ny toerana hanamboarana izany ihany koa. Tanteraka izany rehetra izany tamin'ny taona 2016.
Ny Kianja Skate Voalohany !!!
Ny kianja Ktm Skate Park !!!
Niady mafy izahay mba hanantaterahana izany. Farany dia nanana ny kianja mahatalanjona ho an'ny skateboard izahay ao an-drenivohitra izay nanova ny fomba fiainan'ny ankizy maro ary nahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa, mahatoky tena ary ho matotra kokoa amin'ny filalaovana skateboard
Ary indro ny sarin'i Ujwol miaraka amin'ny takelaka skateboard:
Ny kianja ho an'ny skateboard tokana sady voalohany ao Kathmandu, Ktm Skate Park !!!
Tongava hizaha !! Hilalao skateboard sy hiala voly !!
Endrika miavaka eo amin'ny sehatry ny filalaovana skateboard ao Nepal amin'izao fotoana izao i Ujwol, izay hisandratan'ny fanatanjahantena tsikelikely. Na dia eo aza ny lazany miha-mitombo manerantany — ary eny fa na dia ny vao hanombohany voalohany any amin'ny Lalao Olaimpika taona 2020 any Tokyo aza–, ao Nepal kosa izany dia mbola mifandraika amin'ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava.
Saingy tsy namela izany hanakivy azy i Ujwol: ankoatra ny fikarakarana fampianarana any an-tsekoly dia manao hetsika mba hanome laza ilay fanatanjahantena manerana ny firenena ihany koa izy. Farany, tiany ho hita ho fanatanjahantena hankasitrahana any an-tsekoly ny fanaovana skateboard.
Tamin'ny taona 2016, nitondra mpilalao skateboard roa izy mba hifaninana tany amin'ny Asian Skateboarding Championship (Fifaninanana Skateboard tany Azia) tany Shanghai, Shina, ary tamin'ity taona ity ny mpitantana ny ekipa skateboard tany amin'ny Asian Games (Lalao Aziatika) tany Jakarta (indrisy anefa fa tsy nisy medaly azon'i Nepal tamin'ireo fifaninanana ireo).
Anisan'ireo mpilalao skateboard izay matetika milalao ao amin'ny kianjan'i Ujwol filalaovana skateboard i Jitendra, izay tsy nanakana azy ny fahasembanany.
Matetika i Ujwol no mampiasa ny media sosialy mba hanehoana ireo mpilalao skateboard hafa ao amin'ny kianja:
Ankizivavy mitarika ankizivavy milalao skateboard !!
Tena mankafy ny kianja filalaovana skateboard voalohany ao kathmandu ny tanora
Mitsidika anay ny olona ary manohana anay
Toa nanosika ny lazan'ny skateboard tao Nepal ny kianja Ktm Skate Park, lasa nisy ireo kianja fanaovana skate hafa izay nipoitra tany amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena – ny kianja Annapurna Skate Park ao Pokhara no farany nanampy ny lisitra.